कडा बिचार राख्ने मुकुन्देको कोमल मन - लुम्बिनी समाचार
कडा बिचार राख्ने मुकुन्देको कोमल मन
काठमाडौं । समसामयिक बिषयमा आफ्नो फरक मत राख्दै आएका मुकुन्द घिमिरे मुकुन्दे सामाजिक संजालका आलोचित पात्र हुन् । मुकुन्द घिमिरेलाई असामान्य चेतना भएको मान्छेका रुपमा धेरैले बुझ्ने गरेका छन् । यद्धपी फरक मत र आलोचित अभिव्यक्तिकै कारण सामाजिक संजालमा आलोचनाको शिकार हुन पुगेका मुकुन्देलाई गालीगलौज गर्ने देखि मर्ने धम्कि सम्म आइरहेका छन् । तर पनि त्यी सबै कुराहरुलाई उनि सहजै स्वीकार्दै हुड्छन बेवास्था गरिदिन्छन ।
मुकुन्द ल्याण्डको सपना बोकेका मोरङ लक्ष्मीमार्गका मुकुन्द्र घिमिरे (मुकुन्दे) एकाएक उर्लाबारीमा भेटिए । नेपालकै नमूना बाल गृहको रुपमा उर्लाबारीमा स्थापित नमूना बाल गृहका बालबालिकालाई झुल वितरण गरे । एक्कासी मुकुन्दे सामाजिक क्रियाकलापमा सक्रिय भएको देखेर धेरै आश्चर्य चकित भएका छन् ।
मुर्तिकार मञ्जुल मितेरीले सहयोग गरेका २० थान झुल वितरण गर्न मुकुन्देसहित समाजसेबी पूर्ण वाइबा तथा केही संचारकर्मी पुगेका थिए । रत्नपार्क हुँदै सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना धारणाहरु सार्वजनिक गर्दै आएका मुकुन्देको साच्चिकै सहयोगी मन भएकै हो त ? यो जिज्ञासा सबैमा पलाएको छ । नापलाओस पनि कसरि ? जुनसुकै कुरामा आफ्नो अलग मत र धारणा ब्यक्त गर्ने मुकुन्द घिमिरे (मुकुन्दे) एक्कासी सामजिक कार्यमा लागेको देख्दा अचम्म मान्ने धेरै भेटिएका छन, मुकुन्देको आफ्नो छुटै मुकुन्दल्याण्ड बनाउने धारणा राख्दै आइरहेका छन उनि सामाजिक संजाल फेसबुक मा र टुइटर मा निकै चर्चित छन ।